HOYA AUSTRALIST LISA - OO DHAN OO KU SAABSAN DARYEELKA LAGA BILAABO A ILAA Z, SAWIRO IYO VIDEO - SOOSAARKA DALAGGA
Qurxinta Cimilada - Hoya Australist
Sanadkii 1770-kii, British-ka "Cidhiidhiga" ee hoos yimaada amiirka Captain James Cook markii ugu horeysay ee taariikhda soo wajahday xeebaha Australiya wuxuu ku noqday biyihii bayka, kaas oo markii danbe loo yaqaan Botanical. Xeebaheeda, Karl Solender iyo Joseph Banks waxay heleen nooc cusub oo macaan, hoya, waxaana loo yaqaan Hoya australis - koonfurta hoya.
Maanta, waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah Hoya australis, kuwaas oo ka mid ah Beelaha dhaqanka. Mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Hoya Australis Lisa (Hoya Australist Lisa).
Nidaamka xididku waa la jeexay, wuxuu soo saaraa qolka dhulka oo dhan. Rootiyada caafimaadku way adag yihiin waxayna dhuuqaan.
Qofka wayni wuxuu leeyahay caleemo cufan oo dheer, wuxuuna u baahan yahay taageero taas oo uu ku kicin karo. Miisaanka dhumucda qiyaastii 0.4 cm.
Caleemaha koonfurta Khoi Lisa waxay u koraan si aad u qurux badan oo aad u qurux badan - waa oval, cufan, dhalaalaya, halkii ballaadhan oo xididdada muuqda. Bartamaha waa caleen baaluq ah oo caleemo leh dhibco dabacsan, iyo cidhifyadu waa cagaar. Caleemaha yaryar iyo caleemaha ayaa badanaaba jilicsan.
Ubaxa Star waxaa lagu ururiyaa inflorescences waaweyn oo udambeeyay. Taajka ubaxa waa caddaan iyo casaan cas, iyo dhexda waa mid guduudan. Ubaxa wuxuu ku noolyahay wax ka yar hal usbuuc.
Koonfurta Koonfurta ayaa aad u fudud in la sii wado. Waxaa lagu kori karaa dheriga, iyo in lagu xiro dheriyo.
Kala beddelka (iibsashada ka dib)
Wixii hoi australis, ciidda u baahan yahay mid gaar ah, iyo waxa fiican inaad ku beddesho geedka ka soo dukaanka. Qaado digsi yar, xididdada booska looma baahna, marka lagu daro warshad dherer badan ayaa lagu shubaa.
Qalabaynta hoyga Australiya, waxay u fiicantahay inaad qaadato dher cusub - waxaa jiri kara sumoobo ama walxo waxyeelo leh oo ku yimaada "shisheeye".
Laakiin midka cusub ayaa sidoo kale u baahan yahay in si fiican loo nadiifiyo badeecada aan lahayn bacroolka, iyo ciidda waa in la nadiifiyo, sidaas darteed homa lama ciqaabi doono nematodes.
Dhirta yaryar waxaa badanaa la googooyaa sanadkiiba mar bishii, iyo dadka qaangaarka ah - hal mar labadii ama seddex sano. Faafidda canabkiinnu waxay ku barwaaqoobi doonaan sanado badan (17-20 cm dhexroor) dheriyo, iyo ubaxyada ugu fiican iyaga. Caleemaha muddada lagu jiro isu tallaalidda waxay u baahan yihiin in la gaabiyo, oo aan la taaban kuwa gaaban - ubax ayaa u muuqda iyaga.
Waa maxay hootada ku kora adagtahay inaad wacdo dhulka - waa substrate dabacsan oo dabacsan, sida orchids. Waxaa laga iibsan karaa hoya, oo waad ku karin kartaa guriga. Qaado qayb ka mid ah dhul caleen ah, peat iyo perlite (dhagaxa volcanic, la jajabiyey iyo dabacsan). Haddii perlite aanay ahayn, waxaad ku bedeli kartaa ciid. Waa inay jirtaa daloolka hoose ee dheriga.
Hoya australis waxay jecel yihiin qoyaan joogto ah, laakiin ma qoyaan qoyaan. Ma aha hal hoy jecel in uu koro xididdada qoyan. Waraabin badan oo dhoobo ah iyo dhoobo dareere ah, kuwaas oo xididdada la dhigo, ma aha wax la mid ah. Carrabku waa inuu qoyan yahay qoyan. iyada oo aan qoyanayn. Waxaad u baahan tahay inaad biyo u isticmaasho biyo jilicsan marka ciidda ay ka soo baxdo 2-3 sintimitir. Xagaaga, haddii aysan jirin kuleyl - hal mar asbuucii (kuleylka - marar badan), xilliga qaboobaha - 10 maalmood oo kasta.
Cimilada kulul, Koonfurta Hoya waxay ku farxi doontaa in ay "roob" diiran tahay. Haddii uu geedka blooms, ha ku waraabin ubax - waa waxyeello iyaga. Haddii cimilo qallalan oo hawada kulul ay dheer tahay, ku dheji dheriga hoostiisa "barkin" dhoobo qoyan.
Hoya australis Lisa ayaa si fiican u kori doonta hadhka qayb ahaan, laakiin iftiinka iftiinka iftiinka wuxuu u fiican yahay iyada, sidaas darteed nalka dabiiciga ah ma gubayo caleemaha.
Dariishada koonfur-bari ama koonfur-galbeed waa waxa aad u baahan tahay.
Wakhtiga nasashada ee hoyga gudaha ee caadiga ah looma baahna. Waxay jeceshahay maalintii 14-saac saacadaha iftiinka, iyo xilliga qaboobaha waxay u baahan tahay nalal. Halkaas oo kale, Hoya ma kori doono. Haddii aad go'aansato inaad sameyso iyada oo aan lahayn iftiin jiilaalka, yareeyo biyaha iyo ma codsan quudinta dheeriga ah - ha ubax ha ahaato.
Hoya Australia waxay door bidaa heerkulka celceliska xagaaga + 17-24 ° S, xilliga qaboobaha + 15 ° C. Hase yeeshee, qoraalada wax-qabadku waxay u dulqaadanayaan si liidata waxayna lumin karaan iyaga oo leh caleemo xarrago leh.
Ma jiro fikrad la isku hallayn karo oo ku saabsan dharka hoistirada hoist aaska ee beeralayda ubaxa, marka laga reebo laga yaabo inay hal shay: waxaa fiican in la siiyo wax ka yar si aad u bixiso wax badan, sababtoo ah riixaya ubaxa "xad dhaafka" waa mid aad u adag.
Muddada koritaanka firfircoon, waxaad ku dili kartaa hoya (hal mar 3 toddobaad) bacriminta nitrogen dareeraha ah, oo qallajin waa inay noqotaa laba jeer oo khafiif ah inta lagu sheegay tilmaamaha. Natiijooyinka ugu fiican ee maalmood ubax siin bacriminta for succulents ubax. Xilliga qaboobaha, marka xawaaruhu sii kobcayo, waxaa wanaagsan inaad diiddo quudinta.
Gooyn for rooting waa ka wanaagsan in ay qaataan guga iyo dayrta. Kursiga ayaa loo baahan yahay, halka ay jiraan hal ama labo jajab oo caleemo, iyo kuwa dheer.
Xididdadu way ka muuqanayaan meertada halka caleemaha ay ku koraan, laakiin hoos ku dhacaan, sidaa daraadeed jeexi jirida, ka baxa internode
In dhererka biyood hoy australis ugu fudud. Way fiicantahay inaad ku darto xidid iyo kiniin kobcin leh oo firfircoon si looga hortago lakabka.
Waxaad u baahan tahay inaad bedesho biyaha toddobaadkii hal mar. Haddii gooyuhu yaryahay, ma dabooli kartid, laakiin haddii caleemaha ay ku habboon yihiin, bacda dusha sare saar.
Gooynta xididdada Vermiculite ayaa sidoo kale ku habboon.maxaa yeelay Macdaneygu wuxuu ilaaliyaa qoyaan joogto ah. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu qoyo ciidda ka dib markaad qalajiso, laakiin si aan biyuhu u joogsan.
Ku rid basikululus koob oo hufan - marka jirridu ay siiso xididada, waxaad arki doontaa. Daboolida filimka filimka si aad u diiriso oo qoyan. Heerkulka ugu fiican waa 20-22 ° C.
Hoos-u-dhiska iftiinka, Hoya sidoo kale waa la rujin karaa. Si aad u diyaargarowdo waa sahlan: qaado qaybo siman oo caleemo ah iyo dhuxul-xoqan ama xiirta. Waxaad ku dari kartaa ciidda iyo substrate dhamaystiran oo ka socda dukaanka. Ku shub walxo galaas, qoyan, meel jarjaree oo dabool. Marka walxaha isku qasan, mar kale qoyi.
Rootiyada Hoi waa inay sugaan 3-4 toddobaad. Marka ay muuqdaan, dhirta waa wakhtiga dheriga.
Habkani waxaa loo isticmaalaa si yar. inkastoo ay fududahay oo dhakhso badan tahay. On caleemaha yar yar ee warshadda, ka dhigi jeexan, ku dabool leh maqaarka qoyan iyo si adag u duub filim fuushan. Ka dhig foomkan 2 toddobaad, inta lagu jiro waqtigan qoyan maqaarka 1-2 jeer markii ay qoyaan. Laba toddobaad gudahood, baxsigu wuxuu siin doonaa xidid. Iska yaree, xoqdo xididdada dhirta oo koray - fasax. In hal dheri ah lagu beeray karo 3 layman - Bush wuxuu noqon doonaa mid aad u qurux badan. Xulashadani waxay u oggolaataa in uu geedka ku beerayo sanadka ugu horeeya.
Hoya australis Blooms marka uu dhirta dhaqan galo. Mararka qaarkood ubaxu waa inay sugaan dhowr sanadood, laakiin markaa si joogto ah ayuu u bloomi doonaa. Muddada ubaxeedka ee bilaha Juun ilaa Oktoobar. Duufka koowaad ee ubax caadi ahaan waa caadi bishii Juun, iyo labaad - bilawga xilliga dayrta.
Marka hoya ay ka soo baxdo burooyinkeeda, ha u guurin meel kale - way isku laaban kartaa.
Ka dib marka xiddigaha udgoon ee ubaxyada ubaxu ku engegaan, ha jarin caws ubaxa, burooyinkoodii cusub ayaa ka muuqda iyaga sannadka soo socda.
Hoya Australis waxeey lee dahay qoyaan xoog leh oo qurux badan. Noocyada kala duwan ee udboodku way kala duwanyihiin - qaar khafiif ah oo jilicsan, kuwa kale oo dhalaalaya oo dhirbaaxaysan. Hoya Lisa, tusaale ahaan, waxay soo saaraa dareen cusub oo iftiimiya oo u eg urta tulipsada.
Hoya ma jecla inaad gooysid, laakiin caleemaha dhintay ama jirran waa in laga saaraa. Caleemaha dhaadheer ee dhaadheer ayaa sidoo kale qiimo jaban.
Haddii aysan jirin wax ubax ah iyaga ka hor, ma muuqan doonaan.
Noocyada Koonfurta Kuuriya waxay u koraan si aan kala go 'lahayn, qaababka kala-duwan oo is-bedbeddelaya - iskudhaf yar.
Laakiin Hoya australis Lisa si dhaqso ah ayey u koreysaa oo si joogta ah - taasi waa mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda.
A warshad dilka ah, oo leh daryeel ku haboon, ku noolaan karaan iyo Bloom in ka badan toban sano.
Koonfurta Hoya dhif ayay ku jirtaa dabiiciga, laakiin dhirta koritaanka gudaha ah waxay wiiqi kartaa daryeelka aan habooneyn, ka dibna waxaa soo weerara cayayaanka.
Caarada Spider, aphids, cayayaan qiyaasta - waxay jiidaan juuska ka baxay ubaxa, xakameynaya koritaankeeda, khiyaanada caleemaha.
Waxa la qabanayo: Haddii huuradaada caleemaha ay cufan tahay, "wax", waxaad iyaga ku tirtiri kartaa dhar wasakhaysan oo qashinka lagu cabo - bukaanku markiiba wuu dhimanayaa. Qaab kale: u daawee dhogorta leh Aktely ama daroogo kale oo la mid ah.
Mealybugs - "injirta shaggy" ayaa aad u xanaaqaaya dhirta sidoo kale waxay ka tagaan dhejis xajmi ah oo faafa infakshanka fujiyey.
Waxa la qabanayo: ku dar cayayaanka si biyo ah waraabka. Suntada iyada oo xididdada ku kala firdhisan dhammaan qeybaha ubaxa, iyadoon loo eegin waxa ay dulin, waxay noqon doonaan sumeyn. Habboon: Karbofos, Intravir, Aktellik, Tsvetofos.
Root-caleemaha - fungus ku dhufto iyo hareeraha xididada, haddii ay ku nool yihiin qoyaan joogto ah.
Waxa la qabanayo: ka saar hoya ka dheriga oo fiirso xididada. Haddii ay jilicsan yihiin oo madow - ubaxa lama badbaadi karo, marka laga reebo in la gooyo gooynta iyo koraan mar kale.
Haddii aad ku guulaysatay in aad qabato cudurka bilowgii - waxaa jira fursad. Ka saar ubaxa dheriga, u qallaji maalmo dhowr ah, ruxruxa dhulka. Iska yaree dhammaan wixii cayayaanka - saameeyay, caleemaha, xididdada. Ku rid dhererka dheriga oo ku shub xal casaanka caarada ah ee kiniinka potassium ama carbendazim (waxaa jira fungicide dukaamada).
Way adag tahay in la badbaadiyo koonfurta koofiyadaha cudurada, xiniinyaha iyo si ay u koraan fidinta tufaaxa-ubaxa - waxaad u baahan tahay inaad raacdo xeerarka fudud ee daryeelka.
Marka xigta waxaad arki doontaa sawirka Hoya Australiya: